Shiinaha Fibreglass Emulsion e galaas galaas fidsan gogosha 450 warshad iyo shirkado | Yuniu
Miisaanka caadiga ah (g / m2)
Khasaaraha dabka (%)
1. Dhirta dharka, jilicsanaanta iyo adkaanta wanaagsan.
2. Is waafajin wanaagsan oo cusbada leh, si fudud gebi ahaanba qoyan.
3. Xawaaraha-qoyan-deg-deg ah oo isdaba-joog ah ee xarkaha iyo soosaarka wanaagsan.
4. Qalabka farsamada wanaagsan, goynta fudud.
5. Qaab wanaagsan oo daboolan, oo ku habboon qaabeynta qaababka isku dhafan.
Hal duub oo hal polybag ah, ka dibna hal duudduuban oo hal kartoon ah, ka dibna xirxirida sariirtaada, 35kg / duub ayaa ah miisaanka duudduuban ee halbeeg ah.
Q1: Maxay yihiin tartamayaasha dal iyo dibadba? Marka la barbar dhigo iyaga, waa maxay faa'iidooyinkaaga iyo khasaaruhu?
Shiinaha Jushi, Maro adag Taishan, Sichuan Weibo, CNBM, Owens Corning
S2: Waa kuwee aagaga suuqa aad inta badan daboosho?
Dhammaantood waxay leeyihiin ....
Q3: Maxay yihiin kanaalkaaga loogu talagalay horumarinta macaamiisha?
Bandhigga Caalamiga ah, dhiirrigelinta Google, Alibaba, madeinchina, SNS, iwm
S4: Ma leedahay sumad kuu gaar ah?
Fiilooyinka galaaska Yuniu
S5: Ma ka qaybgashaa bandhigga? Waa maxay faahfaahintu?
S6: Maxay yihiin qalabka isgaarsiinta khadka tooska ah ee internetka aad ku haysato?
Hore: 1200Tex 2400Tex Maro adag toos Roving From Shiinaha
Xiga: Heat-u-adkaysta Muraayadda Muraayadda Tayada oo tayo sare leh